राजन मुकारुङको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति साहित्यकार तथा लेखक महासंघ - Limbuwan khabar
राजन मुकारुङको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति साहित्यकार तथा लेखक महासंघ
सोमबार, ०९ चैत, २०७७ बिहानको ०६:३३ बजे, लिम्बुवान न्युज
ललितपुर। लेखक राजन मुकारुङको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको छ । ललितपुरको यालाखिम रेष्टुरेन्टमा आज सम्पन्न महासंघको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले सर्वसम्मतिमा महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टङ्क सेलिङ, उपाध्यक्षहरुमा रजनीमिला, जगबहादुर बुढा, डा. विष्णुकुमार सिङजाली, वेचन उराँव, डा. कृष्णराज सर्वहारी, डा. सोमबहादुर धिमाल, गौरी तमू र उत्तमकुमार सुनुवार सर्वसम्मतिले चयन भएका छन् । महासचिवमा बुद्ध योञ्जन लामा चयन भएका छन् । सचिवहरुमा क्रमशः लक्ष्मी रुम्बा, अन्वेश थुलुङ्ग, प्रेमीला राई, बच्चु हिमांशु, जीवनप्रवेश रोकामगर, कुन्साङ र मेनुका छन्त्याल चयन भएका छन् । महासंघको कोषाध्यक्षमा उर्मिला गम्बा थारु र सह–कोषाध्यक्षमा जितेन पन्धाक चयन भएका छन् ।